Umatshini wokuPrinta i-China oPhezulu kunye noMthengisi | Mestech
Ukugqitywa kwePlastikiyinkqubo ekhethekileyo yokubumba inaliti, esetyenziselwa ukudibanisa iinxalenye zezinto ezimbini zibe yinxalenye enye ngenaliti yokubumba. La malungu mabini abunjwe kabini kwizibumbeko ezahlukeneyo kunye nakwimishini yokubumba yenaliti.
Iplastikhi ngaphezulu kokubumba yinkqubo yokubeka indawo enye okanye ezingaphezulu ezikhoyo zeplastiki kwizinto ezahlukeneyo ngaphambi kokubumba inaliti, emva koko kufakwe iplastiki kubumbano, isiciko sezinto ezifakiweyo okanye ukusonga iindawo esele zibekiwe ukuze zenze icandelo elinye.
Inyathelo lokuqala: lungisa indawo ebekwe kwangaphambili. (Mold1)
Inyathelo lesibini: beka pre-ibekwe ngenaliti ngumngundo, kwaye wenze ngaphezulu-ekubumbeni nge-resin yeplastiki. (Mold2)
Inxalenye yokugqibela yeplastiki
Zimbini iintlobo zokubumba okungaphezulu
Uhlobo lwe-1: Izinto ezibekwe ngaphambili / izinto zeplastiki, ezazenziwe ngaphambili kolunye ubumba. Le ndlela yeyokubumba inaliti ezimbini. Le yiplastikhi ngaphezulu kokubumba esixoxe ngako apha.
Uhlobo lwe-2: Amacandelo abekwe ngaphambili ayiziplastiki, kodwa inokuba sisinyithi okanye ezinye izinto eziqinileyo (umz. Izinto zombane). Le nkqubo siyibiza ngokuba kukufaka.
Ngokwesiqhelo iinxalenye esele zibekiwe zigqunywe ngokuyinxenye okanye zigutyungelwe ngokupheleleyo zizinto ezilandelayo (izinto zeplastiki) kwinkqubo yokubumba ngaphezulu.
Ngaba uyazi isicelo yeplastiki phezu yokubumba?
Zininzi iinjongo zeplastikhi ngaphezulu kokubumba. Ezona zixhaphakileyo phakathi kwazo zezi zilandelayo:
1. Yongeza umbala ukuhombisa inkangeleko (impembelelo yobuhle).
2. Bonelela ngendawo efanelekileyo yokubamba kuloo ndawo.
3. Ukongeza indawo eguqukayo kumalungu angqingqwa ukwandisa ukubamba kunye nokuziva ubambe.
4. Yongeza i-elastic material ukugubungela imveliso okanye ukutywina ubungqina bamanzi.
5. Gcina ixesha lendibano. Akukho sidingo sokudibanisa icandelo lesinyithi kunye nenxalenye yeplastiki ngesandla okanye ngokuzenzekelayo. Kufuneka ubeke inxenye yehardware kwisibumbeko kwaye ujobe inxenye yeplastiki. Akukho sidingo sokuyihlanganisa konke konke.
5. Lungisa elinye icala ngaphakathi kwelinye ungasebenzisi izinto zokubopha okanye zokubambelela.
Loluphi uhlobo iimveliso zeplastikhi phezu yokubumba ezifanelekileyo?
Inkqubo yeplastiki yokubumba ngaphezulu ilungele iimveliso ezininzi, ezahluka ngokweemeko ezithile zeemveliso. Ngokwesiqhelo zibandakanya iibrashi zamazinyo, izixhobo zokubamba (ezinje ngee-drill ezingenazintambo kunye ne-screwdrivers) kunye neemveliso zokhathalelo lomntu (ezinje ngeebhotile zeshampu kunye neshevers), iiterminal zetambo, iiplagi, iziphathi zeSIM, njl.
I-PC kunye ne-TPU ityala elingangenwa ngamanzi
I-PC kunye ne-TPU ibeka ngaphezulu umnyango webhetri engenamanzi
I-PC kunye ne-PC / i-ABS yokugcwala ityala leplastiki kwimveliso ye-elektroniki
I-PC kunye ne-TPU yokujonga imeko yokhuseleko kwiselfowuni
Umbala omkhulu ubungakanani obukhulu beplastiki
I-ABS kunye ne-TPE yokuqhuba ivili
Nantsi eminye imizekelo eqhelekileyo yezicelo zokubumba ngaphezulu:
1. Iplastiki eqinileyo egubungele iplastikhi- okokuqala, yonke into ebunjiweyo yeplastiki ebunjiweyo. Emva koko enye iplastiki elukhuni itofelwe kuyo okanye ngeenxa zonke kumalungu abekwe ngaphambili. Iiplastiki zingahluka ngombala kunye / okanye nentlaka.
2. Iplastikhi eqinileyo esongelwe nge-elastomer resin ethambileyo- okokuqala, iinxalenye zeplastiki eziqinileyo zibekwe kwangaphambili. I-resin ye-elastomer (i-TPU, i-TPE, i-TPR) iyaxonxwa kuyo okanye ijikeleze iinxalenye ezibekwe ngaphambili. Oku kuhlala kusetyenziselwa ukubonelela ngendawo ethambileyo ebanjwe ngesandla kwiindawo ezinobungqingqwa.
3. Iplastikhi esonge isinyithi - okokuqala, isiseko sentsimbi senziwe ngomatshini, saphoswa okanye senziwe. Emva koko, iinxalenye ezibekwe kwangaphambili zifakwa kwisisu sokubumba, kwaye iplastikhi iyabunjelwa ngaphakathi okanye ijikeleze isinyithi. Oku kuhlala kusetyenziswa ukufaka iinxalenye zentsimbi kumalungu eplastiki.
4.Ilastomer resin egubungela i-Metal-Okokuqala, icandelo lesinyithi lenziwe ngomatshini, laphoswa okanye layilwa. Amacandelo esinyithi abekwe ngaphambili afakwa kumbumba wenaliti kwaye i-resin ye-elastomer ifakwe ngaphakathi okanye ejikeleze isinyithi. Oku kuhlala kusetyenziselwa ukubonelela ngothambile, umphezulu obambeke kakuhle.
5. I-soft elastomer resin esonga i-PCBA okanye izinto ze-elektroniki, imodyuli ekhupha ukukhanya, njl
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho ukusikelwa umda kunye neengxaki zokuhambelana phakathi kwezinto ezahlukeneyo ekufuneka ziqwalaselwe ngokugqitha. Awuphelelanga kwiintlobo ezimbini zezinto. Sibonile ezinye iimveliso, ngokuyinxalenye ezineendawo ezintathu zeplastiki ezidityanisiweyo ukufezekisa imibala emininzi edibeneyo. Nanku umzekelo olula wemveliso oza kuqhelana nayo: izikere.
Ngokwesiqhelo, izinto zangaphambi kokubekwa kwezinto okanye iinxalenye zibekwa kumngundo wenaliti, ngelo xesha ii-resin zeplastikhi ezixineneyo zifakwe ngaphakathi okanye zijikeleze iinxalenye ezibekwe ngaphambili. Xa izinto zenaliti ezifakwe ngaphakathi zipholile kwaye zanyangeka, ezi zinto zimbini zidityanisiwe ukwenza icandelo lokudibana. Iingcebiso ezongezelelekileyo: Ihlala iluluvo olulungileyo ukuba nezinto zakho ezibekwe ngaphambili kunye nezinto ezisongelayo zibanjwe ngomatshini. Ngale ndlela, ezi zinto zimbini zinokudityaniswa hayi ngekhemikhali kuphela, kodwa nangokwasemzimbeni.
Iyintoni inzuzo ngaphezu kokubumba kwimveliso?
Ukubumba phezu ulwakhiwo olulula kunye nenkqubo bhetyebhetye.
1.Isebenza kumalungu aneenxalenye ezinkulu zokugubungela, ngakumbi iinxalenye ezine-bhakethi eguqulweyo. Olu hlobo lwamalungu eplastiki kunzima ukutofwa kumatshini omnye wokubumba ngenaliti yokubumba enemibala emibini, enokufezekiswa ngeplastiki.
2. Xa ubume beplastikhi esekwe ngaphambili ilula kwaye ubungakanani buncinci kakhulu, kwaye icandelo lokugqibela linobungakanani obukhulu, kufanelekile ukwamkela
zeplastiki egqunyiweyo ziphene yokubumba. Ngeli xesha, ukungunda kweseti esecwangcisiweyo yenxalenye kungenziwa kuncinci kakhulu okanye kumngxunya womngxunya omninzi, onokunciphisa kakhulu iindleko zokubumba.
3. Xa iindawo ezibekwe kwangaphambili kunye nezinto ezifakwe kuyo zonke iiplastiki (i-resins), kucetyiswa ukuba inkqubo yokubumba inaliti kufuneka isetyenziswe kwimveliso yobuninzi endaweni yokugqitha ukuze ufumane umgangatho ophezulu, imveliso ephezulu kunye neendleko eziphantsi. Xa imveliso encinci yebhetshi okanye iimfuno zekhwalithi aziphezulu, ukugqithisa ngaphezulu kunokusetyenziselwa ukunqanda utyalo-mali kumatshini wokwenza inaliti kabini kunye neendleko eziphezulu zokwenza umngundo.
Zeziphi izinto zokwenziwa ezenziwe kwangaphambili?
Sibiza iinxalenye ezazibekwe kuqala ekubumbeni iinxalenye ezibekwe ngaphambili (okanye iinxalenye ezibekwe ngaphambili).
Iindawo ezibekwe kwangaphambili zinokuba zizo naziphi na izinto eziqinileyo, icandelo lesinyithi elenziwe ngomatshini, icandelo leplastikhi ebunjiweyo, okanye imveliso esele ikhona, enjenge-nut, isikulufa, okanye isixhobo sokudibanisa i-elektroniki. La malungu abekwe kwangaphambili aya kudityaniswa neeplastikhi ezivavwe kamva ukwenza icandelo elinye ngokwenza kwamachiza kunye nokunxibelelana ngomatshini. Ii-resins ze-elastomer (i-TPU, i-TPE, i-TPR) nazo ziyi-plastiki, kodwa azifanelekanga ukuba zibekwe ngaphambili.
Uyikhetha njani intlaka zeplastiki ngaphezulu kokubumba?
Iiplastikhi zeplastikhi ezisetyenziswa ngaphezulu kokubumba zihlala ziiplastiki. Ziqala ngohlobo lwamaqhekeza, kwaye iqondo lokunyibilika kwawo lihlala lisezantsi kunalawo abekwe ngaphambili ukukhusela iindawo esele zibekiwe zingonakaliswa bubushushu obuphezulu. La masuntswana axutywe nezongezo ezinje ngombala, iiarhente ezinegwebu kunye nezinye izinto ezizalisayo. Emva koko kufudunyezwa ukuya kwindawo yokunyibilika kwaye kufakwe ngaphakathi ekubumbeni njengolwelo. Kukho umda kwimathiriyeli efanelekileyo ekubunjweni ngaphezulu. Ukuba iinxalenye ezibekwe kwangaphambili zizinto zentsimbi, ungasebenzisa nayiphi na iplastiki njengezinto ezigqithisileyo. Iingxaki zokuhambelana zinokubakho ukuba icandelo elibekwe ngaphambili lenziwe ngenye i-resin yeplastiki (irabha okanye i-TPE) enendawo ephantsi yokunyibilika.
Ngaba uyazi ukuba umatshini ziphene yokubumba ngenxa yokubumba?
Umatshini ziphene yokubumba esetyenziswa zeplastikhi phezu-sukube ngumatshini eqhelekileyo ziphene sukube, nto leyo yahlulwe yaziindidi ezimbini: nkqo nkqo.
1. nkqo ziphene umatshini yokubumba ithatha indawo ngaphezu othe tyaba umatshini yokubumba le tonnage efanayo, nto leyo kungelula ukuyigcina, ngoko ke le tonnage idla ezincinane. Ingakumbi zilungele iinxalenye ubungakanani amancinci okanye iindawo pre-ibekwe akukho lula ukuba zilungiswe ngumngundo.
2. Umatshini wenaliti otyhidiweyo othe tyaba uneetoni ezinkulu kunye nendawo encinci yokuhlala, efanelekileyo ekubunjweni kwamalungu amakhulu.
Indlela ukukhetha umatshini ziphene sukube ngaphezu yokubumba?
1. nkqo ziphene umatshini yokubumba idla ngokusetyenziswa iindawo ezincinane ezifana iiterminal ucingo kunye izihlanganisi, iiplagi amandla, iilensi njalo njalo. Ukubumba kulula kwaye kuyasebenza.
2. Umatshini wokubumba othe tyaba usetyenziselwa iinxalenye ezinkulu, ezinamandla aneleyo kwaye zithambekele ekusebenzeni.
3. Kucetyiswa imibala-mbini yenaliti kwiindawo ezibekwe ngaphambili kunye nezinto ezifakwe ngaphakathi, ezinokufikelela kumgangatho ongcono kunye nemveliso kunokubumba ngenaliti.
Umngundo ziphene yokubumba
Ukugqithisa ngokuqhelekileyo kuneeseti ezimbini zokubumba. Enye yeyokubumba indawo ebekwe ngaphambili, enye yeyokugqibela yokubumba ngaphezulu.
Xa amalungu pre-ibekwe non-zeplastiki okanye akukho mfuneko ziphene sukube, kufuneka iseti enye kuphela ngumngundo eziphambili. Le nkqubo siyibiza ngokuba kukufaka.
Inkampani kaMestech inamava ekubumbeni ngenaliti yeplastikhi, ngakumbi kwiplastikhi enxibe inaliti yokubumba amaqokobhe eemveliso ezahlukeneyo zombane kunye nezombane ezinezixhobo njengezixhobo ezisetiweyo. I-Mestech ikwaxhotyiswe ngoomatshini bokubumba inaliti enemibala emibini, enokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zamalungu eplastiki anemibala emibini, iinxalenye zeplastikhi ezifakwe kumbumba kunye nenaliti yokubumba. Ukuba uyayifuna, nceda unxibelelane nathi.
Egqithileyo Iingcebiso malunga nokuyila kweeplastiki kunye nokubumba
Okulandelayo: Ukuhonjiswa kwe-In-Mold-IML
Metal bexhentsa ngumngundo